နန်းဆိုင်နွမ်| February 5, 2013 | Hits:7,274
| | “နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဝက်ဘ်ဆိုက် DDoS တိုက်ခိုက်နေသော ဇစ်မြစ်” ဟု ရေးသားဖော်ပြထားသော မှူးဇော် ဖေ့ဘွတ်မှ
“နိုင်ငံတကာ သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်” ဆု ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးအောင်ဇော် ချီးမြှင့်ခံရနေပြည်တော် ဒေးလီးခေတ် မဟုတ်တော့သတင်းသမားများ ဖမ်းဆီးထောင်ချမှု အာဏာရှင်ဆန်ဟု အမေရိကန် ဝေဖန်စာနယ်ဇင်း ဖိနှိပ်မှု ဘာကြောင့်လုပ်သလဲဆန္ဒပြ သတင်းသမားများကို ဂျာနယ်တိုက်လိုက်၍ စိစစ်တရားစွဲမည်
ဌေးဝင်း February 5, 2013 - 7:19 pm သမ္မတရုံးက ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက….MS Office word, excel. powerpoint, နဲ့ facebook သုံးတတ်ရုံနဲ့…..တိုက်ခိုက်မှုလုပ်သည့် အဖွဲ့သည် နောက်ဆုံးသတင်းများအရ အင်ဒိုနီးရှားမှ လာသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း …..လူအထင်ကြီးအောင်….ဘာညာလျှောက်ပြောနေတာ….တကယ်တော့သူဘာမှမသ်ိရှာပါဘူး။
Reply မြန်မာပြည်သား February 5, 2013 - 9:56 pm ကိုဌေးဝင်းရေ ဒီလို လုပ်မှလည်း သမ္မတရုံးမှာ မြဲမှာပေါ့။
Reply pps၁၂၃၄၅ February 5, 2013 - 8:15 pm ဘယ်သူတွေဖြစ်ရမှာ လဲ။ ဘောင်းဘီဝတ်တွေ ချွတ်တွေပဲပေါ့။
Reply Tokekyi February 5, 2013 - 8:30 pm I’d like to recommend not to use computer devices made in China because of the security case between USA and one of Chinese company.
Reply thihamin February 5, 2013 - 9:42 pm ဒီကောင်တွေ(စစ်တပ်)က ဘာမှသာမလုပ်တတ်တာ။ လူမိုက်ငှားတာတို့၊ သူခိုးသေဖေါ်ညှိတာတို့၊